Ahoana no manova ny ICO Market in 2018? - Blockchain News
2017 mipoaka nahita fitomboana teo amin'ny isan'ny ICOs, ho toy ny revolisionera fomba hisarihana ny fampiasam-bola. Ity taona ity 234 ICO tetikasa efa nanangana mihoatra noho ny $3.7 lavitrisa, amin'ny ampahany be indrindra amin'ny fampiasam-bola ho nahasarika tanteraka avy May ka hatramin'ny Oktobra, araka ny Coinschedule. Ny manam-pahaizana mino fa amin'ny herintaona, na izany aza, fironana io dia mandà sy ICO tsena hiatrika ny fihenana lehibe sy ny rafitra.
Araka ny Jerry Brito, Tale mpanatanteraka ao amin'ny fikambanana tsy mitady tombontsoa Coin-Center, fitondram-panjakana dia hitombo fanaraha-maso ny famantarana varotra. Tamin'ity taona ity ny US Fiarovana sy Exchange Commission (SEC) fa ny virtoaly vola madinika na famantarana izay aterina na nivarotra mety ho Fiarovana. Raha toa izy ireo Fiarovana, ny tolotra sy ny fivarotana ireo vola madinika virtoaly na famantarana ao amin'ny ICO dia manaiky hozakain'izy Fiarovana ny lalàna federaly. Noho izany, Nametraka ny SEC fiampangana ny scam sy ny tsy fanajana ny lalàna manohitra maro ICO mpikarakara. Brito mihevitra fa ny firenena hafa, izay handeha haka anti-scam fepetra, dia hanaraka ny ohatra Etazonia.
Ny mila famantarana varotra mba hanaraka ny fitsipika SEC, ampiarahana amin'ny mpampiasa vola’ faniriana lehibe kokoa fahatokiana, dia mety hitondra any amin'ny fironana vaovao. In 2018, hitantsika ny firongatry ny sehatra ho ny fanatitra ho famantarana vaovao izay mahafeno fepetra tsara kokoa ny famantarana nefa mbola tsy navela hamidy, ary hanampy mpampiasa vola ho tsara kokoa ny fitsarana momba azy ireo.
Brito dia maminavina fa voalohany, sehatra ireo ihany hisokatra ho deraina mpampiasa vola.
Noho izany, toy ny orinasa professionalizes, dia mety hahita fa ny fefy dia vaky ICO. Raha ny tena izy, dia mihena firy no midika fa misy vitsy fotsiny fisolokiana. Amin'ny maha-modely famatsiam-bola vaovao, ICOs eto ny hijanona.
Oliver Bussmann, mpanorina sy ny fitantanana ny mpiara-miasa ao amin'ny Birao Mpanolo-tsaina Bussmann, ny filohan'ny tsy-ho-tombony Crypto Valley Association sy ny vondrona teo aloha CIO sy ny talen'ny fitantanana ara-bola ao amin'ny Soisa mitazona UBS, mafy dia mino fa ny tontolon'ny ICOs ho lasa matotra kokoa amin'ny 2018 araka ny fomba nentin-drazana mpilalao mahazo anjara. Vokatr'izany, dia vola ny IPO traikefa sy ny fahaizany mba hampivelatra vaovao tsena sy ny raharaham-barotra manontolo hikambana amin'ny voarafitra tsara kokoa sy matihanina kokoa hisarihana modely ny fampiasam-bola.
Nandritra ny volana manaraka 12-18, Manantena aho dia hisy ny toetra ICO, toy ny boky trano, Pricing, startup tombana, sy ny sisa. Rehefa Efa nanomboka ny mahita, dia ho sarotra ny hahazo fanampiana ara-bola fotsiny ao ambadiky ny taratasy fotsy. Mpampiasa vola; Hanontany feo sy ny raharaham-barotra drafitra ambaratonga avo ny mangarahara.
Ny lohan'i ny sampan-draharaha ara-teknika ao amin'ny Ripple, Stephan Thomas mifanaraka amin'ny kevitra ambony, araka ny lahatsorany ao amin'ny Quora (sehatra ara-tsosialy ny fahalalana ny fizarana). Hitany be dia be ny fampitahana eo amin'ny ICO ahevaheva ankehitriny sy ny altcoin onjam- 2014. Noho izany, ny voalohany natrehin'ireo dia hanome fomba azo kokoa sy mahay mandanjalanja ICO; ICOs maro dia tsy maintsy hanova ny fomba hisarihana ny fampiasam-bola. Mark Lurie koa mino fa amin'ny herintaona dia hisy maro kokoa renivohitra rafitra izay rehetra mandeha any amin'ny faran'izay tsara tetikasa.
Dia hisy shakeout any ICOs sy fiaramanidina ny kalitao. Hisy ny fitomboan'ny ny ICOs vitsivitsy izay handeha bust. Hisy kokoa renivohitra rafitra izay rehetra mandeha any amin'ny faran'izay tsara tetikasa. Izany no nitranga nandritra ny krizy ara-bola amin'ny orinasa ny hitsiny capital sy ny fitomboana fihodinana, koa. Ny ankamaroan'ny orinasa tsy afaka manangana misy vola, fa ireo izay afaka manangana ny vola no tena avo teo valuations.
In 2018, ny smartest hetsika ny ampahany amin'ny orinasa manao ICOs sy Bitcoin-mifandray vokatra dia ny wean ny vahoaka sy ny fampahalalam-baovao eny ny “Hafanàm-po an vola” foto-kevitra, araka ny tatitra Wired. Tena fanoharana fa tsy misy dikany intsony, Ary ny mahazo an-dalana ny tokony fahatakarana teknolojia vaovao izay toa vola, fa tena tsy. Fa ICO mpandray anjara dia tsy maintsy manao ezaka be mba hanova ny sary ny orinasa. William Mougayar, fanta-daza Kanadiana Investor, mpandraharaha, sy ny mpanoratra boky maro blockchain, milaza fa ny amin'izao fotoana izao sy ny famantarana ICO tsena diso mahasarika ny mpilalao.
Tsy vitan'ny no famantarana 1.0 hisarihana ny ratsy karazana tetikasa, fa izany ihany koa hisarihana ny ratsy karazana olona izay mahita mpanararaotra tombony avy nihodidina ny vola, nanangana avy amin'ny vahoaka, ary nampanantena ny volana, amin'ny andraikitra kely izay hatao hamely. Voalohany indrindra, tsy maintsy nitsidika sy mampihatra ny fototra baovao ny blockchain. Avy eo dia mila famantarana hanombana miasa manakiana, tsy ny famantarana-fiokoana ny fahaiza-manao. Mila mametraka ny blockchain indray ho ao an-mira, fa tsy ny famantarana.
Vitalik Buterin momba vaovao karazana famantarana ihany koa. Izy no azo antoka fa vaovao 2018-2019 karazana famantarana, ICO 2.0, Hiseho ho matotra kokoa ICO tsena.
Misy hevitra tsara, misy be dia be ny hevitra mahatsiravina, ary misy be dia be tena, tena ratsy hevitra, ary maro ihany koa fisolokiana. Manantena aho fa famantarana lazain'ny 2.0 ary ny karazan-javatra ny olona dia hanomboka ny fanorenana ao 2018 ary 2019 dia, amin'ny ankapobeny, ho betsaka ambony kalitao. Indrindra fa isika indray mandeha izay manomboka mahita ny vokatry ny voalohany onjam-famantarana ao amin'ny mpanelanelana-to-teny intsony.
Previous Post:Blockchain News Janoary 7 2018
Next Post:About ICO: Iza no nanangona vola indrindra nandritra famantarana varotra